auctioned share(auctioned share) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
सहारा विकास बैंकको ९.२१ लाख कित्ता सेयर चैत १२ गतेदेखि लिलामीमा
काठमाण्डौ । सहारा विकास बैंक लिमिटेडले संस्थापक समूहको नबिकेको ९ लाख २१ हजार बढी कित्ता हकप्रद सेयर यही चैत १२ गतेबाट लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्ने भएको छ। बैंकले गत वर्ष जेठ ६ गतेदेखि असार २४ गतेसम्म हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो। त्यस क्रममा संस्थापक समूहको ९ लाख २१ हजार १४८.७० कित्ता सेयर बिक्री भएको थिएन। पछि नबिकेको सेयर...
एलआईसीको स्वामित्वमा रहेको नागरिक लगानी कोषको सेयर आजदेखि लिलामीमा
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरशेन (नेपाल) लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नागरिक लगानी कोषको संस्थापक सेयर आज सोमबारदेखि लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री खुलाएको छ। लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गर्न लागेको हो। लिलामी सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १...
काठमाण्डौ । एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड–१ को स्वामित्वमा रहेका १ लाख ७४ हजार इकाइ ऋणपत्रहरु आज शुक्रबारदेखि लिलामीमा राखिएको छ । एनएमबी बैंक लिमिटेड कोष प्रवद्र्धक तथा यसकम्पनी योजनाव्यवस्थापक रही एनएमबी म्युचअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड–१ को स्वामित्वमा रहेका ऋणपत्रहरु लिलामी �...
मुक्तिनाथ विकास बैंकको अवितरित हकप्रद सेयर आजबाट लिलामीमा, सस्तैमा उठाउने मौका
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको अवितरित ४ लाखभन्दा बढी कित्ता हकप्रद सेयर आज आइतबारदेखि लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्रीमा राखिएको छ । बैंकले गत भदौ १२ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म निष्कासन गरेको हकप्रद सेयरमध्ये बिक्न बाँकी रहेको ४ लाख ३ हजार २२०.२५ कित्ता सेयर लिलामी प्रक्रियामार्फत बिक्री सुरु गरेको हो । जसमा संस्थापक समूहको १ लाख २ हजार...
वोमी लघुवित्तको संस्थापक समूहको ६२ हजार कित्ता सेयर आजबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लिलामीमा पनि बिक्री नभएको संस्थापक समूहको ६२ हजारभन्दा बढी कित्ता हकप्रद सेयर आज बिहीबारबाट पुनः बोलकबलमार्फत बिक्री खुलाएको छ । संस्थाले गत साउन ९ गतेदेखि भदौ ११ गतेसम्म रु १०० अंकित दरका १० लाख १० हजार ८८० कित्ता हकप्रद सेयर निकाष्सन गरेको थियो । जुन कम्पनीको चुक्तापुँजीको...
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २९,३८० कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा आउने, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २९ हजार ३८० कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा आउने भएको छ । बैंकले आगामी कात्तिक २१ गतेदेखि २८ गतेसम्म संस्थापक सेयर लिलामीमा ल्याउन लागेको हो । इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम ३ हजार कित्ताबाट खरीदका लागि गोप्य शिलबन्दी पेश गर्न सक्नेछन् । अधिकतम कित्ताका लागि कुनै सीमा तोकिएको छैन । बैंकले...
लिलामीमा राखिएको ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको हकप्रद सेयर उठाउने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले लिलामीमा राखेको अवितरित हकप्रद सेयर खरिद आवेदन दिने आज मंगलबार अन्तिम अवसर रहेको छ । संस्थाले गत असोज २८ गतेदेखि बिक्री नभएको सर्वसाधारण समूहतर्फको १०० रुपैयाँ अंकित ५६ हजार ५६१ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामीमा राखेको हो । संस्थाले गत साउन २१ गतेदेखि भदौ २३ गतेसम्म निष्कासन गरेको...
ग्लोबल आईएमई लघुवित्तले अवितरित हकप्रद सेयर भोलिबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले अवितरित हकप्रद सेयर भोलि मंगलबारदेखि लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने भएको छ । संस्थाले सर्वसाधारण समूहतर्फको १०० रुपैयाँ अंकित ५६ हजार ५६१ कित्ता हकप्रद सेयर यही असोज २८ गतेदेखि लिलामी प्रक्रियाबाट बिक्री गर्न लागेको हो । संस्थाले गत साउन २१ गतेदेखि भदौ २३ गतेसम्म निष्कासन...
मल्टीपर्पस फिनान्सको अवितरित २४.८७ लाख कित्ता हकप्रद सेयर असोज ३० गतेदेखि लिलामीमा
काठमाण्डौ । मल्टीपर्पस फिनान्स कम्पनी लिमिटेड (वित्तीय सस्था) को अवितरित २४ लाख ८७ हजार २७८ कित्ता हकप्रद सेयर असोज ३० गतेदेखि लिलामीमार्फत बिक्री गरिने भएको छ । कम्पनीले गत असार २३ गतेदेखि भदौ ९ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरमध्ये बिक्न नसकेको सेयर लिलामीमार्फत बेच्न लागेको हो । कम्पनीले नबिकेको संस्थापक समूहको १८ लाख ६० हजार...
सिभिल बैंकको सेयर सस्तोमै उठाउने हो ? छुट्ला यो अवसर
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमीटेडले असार ८ गते(आज)देखि बिक्री नभएको १ लाख ४९ हजार ८९ कित्ता संस्थापक सेयरको लिलामी खुलाएको छ । यो बैंकले केही समयअघि हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको थियो । सो क्रममा बिक्री नभएको संस्थापक समूहतर्फको सेयर लिलामीबाट बिक्री गर्न शिलबन्दी बोलपत्र खुलाइएको हो । इच्छुक लगानीकर्ताले न्यूनतम १०००० कित्ताका लागि र...
गुराँस लाइफको सेयर सस्तोमै पाउन सक्ने अवसर भोलिदेखि
काठमाण्डौ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ३ लाख २२ हजार ५७६ कित्ता सेयर भोलि (बिहीबार) देखि लिलामीमा राख्ने भएको छ । कम्पनीले संस्थापक समूहतर्फको २ लाख ४० हजार ५७१ र सर्वसाधारणतर्फको ८२ हजार ५ कित्ता सेयर लिलामीमा राख्ने भएको हो । यो कम्पनीले २०७५ चैत २८ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म २ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन...
एशियन लाइफको सेयर सस्तोमै पाउने अवसर असार १ देखि
काठमाण्डौ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले बिक्री नभएको २ लाख २१ हजार ३५९.७३ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामीबाट बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले असार १ देखि ८ गतेसम्म नबिकेको सेयरको लिलामी खुलाउने भएको हो । कम्पनीले २ हजार ४२०.७० कित्ता संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण समूहतर्फको २ लाख १८ हजार ९३९.०३ कित्ता सेयर लिलामीमार्फत बिक्री...
रु. ६०० बढीमा कारोबार भइरहेको कम्पनीको सेयर सस्तोमै पाउने अवसर छुट्ला नि !
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा प्रतिकित्ता रु. ६०० भन्दा बढीमा कारोबार भइरहेको मेरो माइक्रोफाइनान्स बित्तीय संस्थाको सेयर सस्तोमै पाउने अवसर खुलेको छ । यो कम्पनीले चुक्तापूँजीको सतप्रतिशतको अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको थियो । हकप्रद सेयर खरीदका लागि परेका सदर आवेदकहरुले ३० लाख ७९ हजार ३५१ कित्ता मात्र खरीद गरेका छन् । यो...
रु. ६०० बढीको सेयर सस्तोमै पाउने अवसर जेठ ७ गतेदेखि
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा प्रतिकित्ता रु. ६०० भन्दा बढीमा कारोबार भइरहेको मेरो माइक्रोफाइनान्स बित्तीय संस्थाको सेयर सस्तोमै पाउने अवसर खुल्ने भएको छ। यो कम्पनीले चुक्तापूँजीको सतप्रतिशतको अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्कासन गरेको थियो । हकप्रद सेयर खरीदका लागि परेका सदर आवेदकहरुले ३० लाख ७९ हजार ३५१ कित्ता मात्र खरीद गरेका छन्...
गण्डकी विकास बैंकको रिजर्बमा २२% को पहिरो, इपीएसमा पनि गिरावट
काठमाण्डौ । गण्डकी विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म ३९ करोड ३ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा नाफा १४.६६ प्रतिशतले बढाएको हो । बैंकको संचालन मुनाफा ५२ करोडबाट बढेर ६० करोड पुगेको छ भने ७० करोड ५३ लाखमा सीमित खूद ब्याज आम्दानी बढेर ८५ करोड ९७ लाखको उचाईमा पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा...